Yakanakisa Container mhando kongiri batching chirimwa Mugadziri uye Fekitori |Macpex
Simende Weighting Precision
Mvura Weighting Precision
1. Imba yekudzora
(1) Iyo yakakwira yekudzora kamuri inogona kunyatso tarisa mamiriro esaiti.
(2) Periphery inogadzirwa nerata remhando yepamusoro, iro riri mumhepo uye rakanaka.
(3) Yakakwirira simba rose, hapana deformation panguva yekusimudza uye yakasimba.
(4) Dhizaini yemunhu, nzvimbo yakakura yemukati uye yakakwana yekutsigira zvivakwa.
(5) Iine mahwindo kumativi ese, ine chiedza chakakwana uye chiono chakakura, chiri nyore pakuona kwekugadzirwa.
2. Tangi yemvura uye admixture tank
(1) Iyo yese package ine yakanaka tightness uye hapana kuvuza kuve nechokwadi chekugadzira mhando.
(2) Compact chimiro, kuve nechokwadi chekugadzira zvinodiwa uye kuchengetedza midziyo inogara.
(3) Iyo periphery yakashongedzerwa neyemvura level yekuratidzira michina yekutarisa kuchengetedza uye kushandisa chero nguva.
(4) Yakakura yekuchengetedza simba, inosangana zvizere nezvinodiwa zvekugadzira.
3. Batching muchina
(1) Module dhizaini, yakatsvinda uye yakanaka, tichifunga nezvekushandiswa kwezvinhu uye yakagadzikana chimiro.
(2) Kuchengetedzwa kwezvinhu zvakakura, izvo zvinoderedza nguva dzekudya uye kuchengetedza vashandi.
(3) Magonhi ekuburitsa kaviri uye vibrators anogamuchirwa kuti ave nechokwadi chechokwadi uye kuburitswa kwakatsetseka.
1. Modular dhizaini, kukurumidza kuisirwa uye zvigadzirwa zvakapedzwa mumazuva mashanu
Panguva yekumisikidza gungano remunharaunda yekutanga bvunzo chiteshi inoitwa.Imwe neimwe module inoiswa munharaunda.Kuiswa kwenzvimbo yese yekusanganisa chiteshi kunogona kupedzwa nefuremu yese.Iyo yekuisa inochengetedza nguva, inochengetedza basa, uye inokurumidza uye nyore.
2. Yakaderera kuvaka investimendi, diki pasi nzvimbo uye kukurumidza kudzoka
Mukuita kwekugadzira michina uye kusarudzwa kwesaiti, hapana chikonzero chekugadzira hwaro hwakaoma.Chero bedzi iyo kuomarara inotakura kugona uye flatness yesaiti inogona kusangana nezvinodiwa zvemidziyo, michina inogona kupedzwa pasina kuisirwa nheyo uye kugadzira.
3. Kutamisa kuri nyore uye kuchinjika kutama.Ingoenda
Modular assembly inogamuchirwa mukugadzwa kweiyo yekusanganisa chirimwa.Kana ichida kutamiswa, mamodule emunharaunda anogona zvakare kuparadzaniswa, kuitira kuti aone kutamiswa kwese kwenzvimbo hombe yemuchina wekusanganisa, zviri nyore uye nekukurumidza.
4. Purogiramu ine mufananidzo wepamusoro-soro uye iri nyore kushanda nekudzidza
● tora komputa network uye komputa otomatiki kudzora tekinoroji kumisa manejimendi uye kutonga kwese maitiro ekugadzira kongiri.
● ine mabasa ekuenzana, kuchengetedza uye kugadzirisa, uye inogona kunyatsogadzirisa zvakakodzera kudzora parameters.
● dhizaini yekuchengetedza data ine chekuita nemidziyo inogona kutariswa uye kudhindwa mumhando dzakasiyana chero nguva.
● iyo graphical dhizaini yepaneru yekudzora inosimudzira kugadzirwa kwekuita, uye manejimendi ekugadzira ari nyore uye akasununguka.
● hurongwa hwekutonga hwakasiyana-siyana uye hunogona kugadzirirwa nemitauro yakawanda.
5. Kushanda kwakachengeteka uye kwakagadzikana, uye unhu hwechigadzirwa uye huwandu hunovimbiswa
● kugadzikana kwese kwemaitiro emusanganiswa wemiti yakanaka, uye vibration amplitude iduku panguva yekugadzirwa nekushanda, kuitira kuti kuve nechokwadi chekushanda kwakarurama uye kwakagadzikana kwemidziyo uye kuderedza mukana wekugadzirisa.
● tambo yesimbi yeGermany tambo inosarudzwa, kudyisa kwebhakiti rekusimudza kwakadzikama, mana-point limit anti impact roof, uye kuchengetedza kwakakwirira.
● zvinhu zvemushini we batching yakakura uye inorema kuti iwedzere kutakura kwayo uye simba rekuchengetedza.
6. Nguva dzose mushure mekutengesa kuongorora, kuchengetedza kwenguva refu uye basa reimba
● mukati me "nguva nhatu dzekuvimbisa", mapurovhinzi makuru nemaguta anopa 24-awa mushure mekutengesa-basa.
● nguva nenguva, mainjiniya akakosha mushure mekutengesa anoenda kunzvimbo yemutengi kuti agare achiongororwa michina uye kudzidziswa kwevashandi.
● nguva dzose kuita shanyo yekudzoka uye kuchinjana, kuongorora uye kugadzirisa denderedzwa yekutsvaga sevhisi yezvakasiyana-siyana zvinodiwa zvehunyanzvi, uye rega vatengi vanzwe sevhisi chaiyo, inokurumidza, inoshanda uye ine hanya.
7. Pakudanwa kwehurumende, kuchengetedza simba nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza
Ndichiri kubatsira kuchinangwa chekuvaka kwenyika, inovimbisawo kusiya denga rebhuruu kune nyika yaamai.Mukugadzirwa kwechigadzirwa chekusanganiswa, zvinhu zvose zvehupfu zvinoitiswa munzvimbo yakavharwa.Iyo simende bhini yakashongedzerwa neyekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza guruva muunganidzi, iyo inoderedza zvakanyanya kusvibiswa kwezvakatipoteredza kunokonzerwa neguruva uye ruzha, uye inotsigira zvakasimba mutemo wenyika kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
8. Chimiro chekugadzira chine njere uye chakanakira kune kunze kwenyika
Iyo yakazara dhizaini yemusanganiswa chirimwa inochinjika, uye chikamu chimwe nechimwe chechimiro chinogona kutakurwa mumidziyo yekutakura kunze.
Zvakapfuura: Concrete transport system
Zvinotevera: Planetary mixer